Faah-faahinta Kulamadi Xalaly ee Europa League
Waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka Europa League ee Qaarada Yurub. Kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska oo 20 sano kadib sanadkaan ka qeybgaleysa tartanka labaad ee Yurub ayaa xalay mar kale guul ka keentay koobkan, kadib marki ay 4-2 ku garaacday kooxda Bate Borisov ee dalka Belarusia.
Goolasha ay Arsenal ku badisay waxaa laba ka mid ah dhaliyay Walcott, Rob Holdin iyo Olivier Giroud oo dhaliyay goolkiisii boqlaad ee Arsenal.Labada gool ee kooxda Borisov waxaa kala dhaliyay Mirko Ivanic iyo Mikhail Gordeychuk.
Arsenal hadda iyada ayaa lix dhibcood ku hogaamineysa Group H, waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Red Star Belgrade ee dalka Serbia waxay leedahay afar buundo kadib marki ay xalay 1-0 uga bidasay kooxda Cologne ee Jarmalka.
*Group-ka D, Kooxda AC Milan ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Rijeka ee dalka Croatia oo ay ugu awood sheegatay 3-2.
Milan ilaa laga soo gaaro daqiiqadii 84-aad iyada ayaa laba gool iyo waxba ciyaarta ku hogaaminaysay, goolasha waxaa u kala dhaliyay Adre Silva iyo Mateo Musacchio, balse wax walbaa waxay isku badaleen 5 daqiiqo gudahood marki ay laba goo loo deg deg ah keeneen ciyaartooyda kooxda Rijeka.
Labada gool kan hore waxaa dhaliyay Maxwell Acosty halka goolkana kalana uu rigoore ku dhaliyay Josip Elez. Aakhirkii ciyaarta oo ay ka dhimantahay hal daqiiqo ayaa waxaa Milan goolka guusha u dhaliyay weeraryahanka 19-jirka ah Patrick Cutrone.
Isla Group D, kooxaha AEK Athens iyo Austria Wien ayaa isku mari waayay bar barro 2-2 ah.
Group-kan waxaa lix dhibcood ku horkaceysa Milan, waxaa kusoo xigta AEK Athens oo leh 4 buundo.